केले बनाउँछ ‘महान् नेता’ ? - फिचर - कान्तिपुर समाचार
महान् नेता बन्ने एउटा गुण ‘साहस’ हो । जर्मन चान्सलरएन्गेला मार्केलले दस लाख शरणार्थीलाई स्विकारेर एउटा शक्तिशाली उदाहरण प्रस्तुत गरिन् ।
भाद्र १७, २०७४-नेता बन्नका लागि धेरै गुण आवश्यक हुन्छन् । तिनको ख्याल नै नगरी, उनीहरूले गरेका कामको मूल्यांकन नै नगरी ‘राजनेता’, महान् नेतालगायतका पगरी गुथाइदिने गरिएको पाइन्छ । खासमा के गुण र शैलीले नेता महान् हुन्छन् त ? यही प्रश्नलाई लिएर वल्र्ड इकोनोमिक फोरमका संस्थापक तथा अध्यक्ष क्लाउस स्वाव र ली क्वान यु स्कुल अफ पब्लिक पोलिसी सिंगापुरका डिन किशोर महबुवनीले ‘प्रोजेक्ट सिन्डिकेट’ मा एक मन्थन गरेका छन् । त्यसैको अनूदित अंश :
प्रकाशित: भाद्र १७, २०७४
अनिल गुरुङ अटाएनन् राष्ट्रिय टोलीमा ›